Wafdi Ka Socday Qaramada Midoobey oo Maanta Gaaray Somaliland – Goobjoog News
Wafdi Ka Socday Qaramada Midoobey oo Maanta Gaaray Somaliland
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo ayaa xafiiskiisa ku qaabiley wefti balaadhan oo ka socday hay’adda UNCDF oo u qaabilsan adduunka horumarinta dhaqaalaha ee dawladda hoose oo uu hoggaaminayey David Jackson oo ah agaasimaha guud ee 39-ka dawladdood ee ka soo koraya dhinaca dhaqaalaha.
Waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay horumarinta dawladdaha Hoose ee JPLG-ga, waxaanu madaxweyne ku xigeenka Somaliland warbixin ka siiyey madaxa weftiga halka uu marayo horumarinta dhaqaalaha dawladdaha hoose ee Somaliland oo ay taageerto hay’addani, isagoo uga mahadceliyey doorka hay’addaha UN-ku ay ka qaataan ka midho dhalinta barnaamijka JPLG guud ahaan iyo khaasatan doorka horumarinta dhaqaalaha ee ay hay’adda UNCDF ay ka taageerto Dawladdaha hoose ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Iyadoo aad loogu lafo-guray balaadhinta barnaamijkan si loo wada gaadho degmo doorashooyinka dalka mustaqbalka iyo sidii fiiro gaara loo siin lahaa caasimada dalka, waxaanu madaxweyne ku xigeenku u caddeeyey masuuliyiintaasi in qaybtii kaga aadanayd dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ay dhinaceeda bixisay, gobolada bariggana ay ka bilowday barnaamijka JPLG.
Ugu danbayntii waxa la isla qaatay in xukuumadda iyo hay’adda UNCDF ay si wada jira uga wada hawlgalaan kobcinta dhaqaale ee lagu horumarinayo barnaamijkan dawladaha hoose.
Waxaana madaxweyne ku xigeenka ku wehelinaayey kulanka Wasiir ku xigeenka wasaaradda Arrimaha gudaha Somaliland, maayar ku xigeenka Caasimada Somaliland iyo masuuliyiin ka tirsan Xafiiska JPLG-ga u qaabilsan Madaxweyne ku xigeenka Somaliland.
Dhinaca weftiga UNCDF-na waxa ku wehelinaayey agaasimaha UNCDF, Dmitry Pozhidaev oo ah masuulka xafiiska geeska Afrika u qaabilsan hay’adda, Anka Kitunzi oo u qaabilsan Xidhiidhka hay’adda Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya iyo masuuliyiinta xafiiska Somaliland ay ku leedahay Hay’addu.
Waare Oo Furay Kalfadhiga Afaraad Ee Baarlamaanka Hirshabelle
Bilyuuneer Masaari ah oo Ka Codsaday Giriiga iyo Talyaaniga In ay Ka iibiyaan Jaziirad si ay Qaxootiga ku Noolaadaan
Demman zgurhr Cialis buy overnight canadian pharmacy cialis 20mg
Wwvtqg wiqtye Sale viagra cialis daily cost
Slpqoc koaduc Viagra order cialis pills
Tgcgkf bedlhr cialis online cvs pharmacy
Madaxweyne Farmaajo oo Kulan Dhinaca Internet-ka Ah La Qaatay Dhaqaatiirta La Tacaaleysa COVID-19
cialis tabs viagra vs cialis cialis without prescription [ur...
viagra generic 100mg viagra for sale usa viagra uk [url=http...
generic cialis 20 mg generic cialis by mastercard cialis and...
viagra online viagra substitute cheap canadian viagra [url=h...